Alefaso anio izay tianao hatao rahampitso. - Lorii Myers - Quote Pedia
Alefaso anio izay tianao hatao rahampitso. - Lorii Myers
Na dia fiainana tsy ampoizina aza zava-dehibe izay nomanintsika ho an'ny ho avy. Isika rehetra dia manana faniriana sy tanjona tianao hotratrarina amin'ny fiainana. Mba hahatongavan'ireto nofinofy ireto dia zava-dehibe ny hikomahantsika izany. Tsy misy ny fotoana mety na ny toerana mety hanombohana hanomanana izany.
Tsarovy mandrakariva fa ny asa mafy sy ny fahamalinana dia handalo anao fotsiny. Tena zava-dehibe ny drafitra ny ataonao mba hahafahanao mahazo izay tianao sy mahafa-po amin'ny fiainana. Hisy ny sakana ary misy fiovana amin'ny fomba mety nandrafetanao ny dia. Zava-dehibe anefa ianao raha vonona hiatrika ny zava-tsarotra.
Mila miatrika fiainana ianao rehefa manatona anao, saingy zava-dehibe ny mijanona ao anaty toe-javatra toy izany. Mila mitady fomba hafa ianao hiatrehana ny fanovana ary hahatontosa izay tianao amin'ny ho avy.
Mety ho tsapanao koa fa ny zavatra efa nomaninao taloha ho an'ny tenanao dia tsy mahafinaritra anao intsony. Aza adino ny tenanao. Raha mbola mahatsapa fa mahita firehetam-po vaovao tianao tadiavinao ianao dia mila mieritreritra an'izany ianao.
Ataovy foana ny ezaka ary omeo ny tsara indrindra mandra-pahafatinao fa afa-po ianao. Tsy izay rehetra tadiavinao no ho tonga mora, noho izany dia mila manery azy ianao. Tsy tokony hilavo lefona ianao. Hanao fanohanana ianao nefa tadidio ny mpanohana matanjaka indrindra anao hanananao ho anao.
Tsy hisy olona hijoro ho anao amin'izay lalana tianao. Ka aza manary toky mihitsy amin'ny tenanao ary mandroso. Aoka ho fantatrao izay tianao ary miezaha hanana izany. Raha te hahita fiovana ao anaty fiarahamonina ianao dia hanomboka izany ho anao. Aza miandry izay manaporofo ny hevitrao raha heverinao fa mamokatra izy. Raha manao zavatra tsara ianao, ho hitanao ny fiatraikany na ho ela na ho haingana.
Quotes tsara kokoa rahampitso
Teny tsara momba ny andro anio
Teny momba ny antony manosika ho an'ny anio
Raiso ny tenanao
Teny fohy manome aingam-panahy
Teny fohy fohy momba ny andro